Ohabolana 20 - Baiboly Masina [Malagasy Bible 1865] - (Oha 20)
Mpaniratsira ny divay, ary mpitabataba ny toaka, Koa izay miraikiraiky azon'izany dia tsy hendry.
Ny fampitahoran'ny mpanjaka dia toy ny fieron'ny liona tanora; Izay mampahatezitra azy dia mankahà-doza hihatra amin'ny ainy,
Voninahitry ny olona ny hanalavitra ny ady; Fa ny adala rehetra kosa misafoaka.
Ny malaina tsy mety miasa amin'ny ririnina, Ka dia hangataka izy raha fararano, fa tsy hahazo.[Na: noho ny ririnina; na: noho ny haben'ny vokatra]
Rano lalina ny hevitra ao am-pon'ny olona; Fa izay manan-tsaina dia mahay manovo azy ihany,
Maro ny olona samy midera ny soa ataon'ny tenany avy; Fa izay olo-mahatoky, iza moa no mahita azy?
Izay olona marina mandeha amin'ny fahitsiany Sambatra ny zanany mandimby azy.
Mipetraka eo amin'ny seza fitsarana ny mpanjaka, Ka mikororoka manaisotra ny ratsy rehetra ny masony.
Iza no mahazo manao hoe: Efa nahadio ny foko aho Ka madio tsy manana ota?
Ny vato mizana samy hafa sy ny vata famarana samy hafa Dia samy fahavetavetana eo imason'i Jehovah.
Na dia ny zaza aza dia mampiseho amin'ny fanaony Na madio sy mahitsy ny fitondran-tenany.
Ny sofina mandre sy ny maso mahita Dia samy nataon'i Jehovah avokoa.
Aza tia torimaso ianao, fandrao tonga malahelo; Ahirato ny masonao, dia ho voky hanina ianao.
Ratsy! ratsy! hoy ny mpividy; Kanjo nony lasa izy, dia mandoka tena.
Ao ihany ny volamena sy ny voahangy betsaka; Fa ny molotra misy fahalalana no ravaka soa.[Na: perla]
Alao ny lambany, fa efa niantoka olon-kafa izy, Ary tano ho solon'ny vahiny niantohany.[Na: vahiny janga]
Mamin'ny olona ny hanina azo amin'ny fitaka; Kanjo ho feno fasika ny vavany any am-parany.
Ny hevitra rehetra dia aorin'ny fisainana, Ary ny fahaizana mandamina tsara no entonao miady.
Izay mandehandeha manaratsy dia manambara ny hevitra afenina, Koa aza miraharaha amin'izay mibedibedy foana.
Izay manozona ny rainy na ny reniny, Dia ho faty ao amin'ny alim-pito ny jirony.
Ny harena malaky azo foana eo am-boalohany Dia tsy hotahina any am-parany.[Na: mahamahimahina]
Aza manao hoe: Hamaly ny ratsy nataony aho; Fa andraso Jehovah, fa Izy no hamonjy anao.
Fahavetavetana eo imason'i Jehovah ny vato samy hafa, Ary ny mizana mandainga dia tsy tsara.
Avy amin'i Jehovah ny dian'ny olona, Ary hataon'izay olombelona ahoana no hahafantatra ny lalany?
Fandrika amin'ny olona ny malaky manao hoe: Zavatra masina ity; Ka nony vita ny voady, vao mamototra.
Ny mpanjaka hendry mikororoka manaisotra ny ratsy fanahy Sady mitarika ny kodia fivelezana eo amboniny.
Jiron'i Jehovah ny fanahin'ny olona, Itsilovana ny efitrefitra rehetra ao am-po.
Famindram-po sy fahamarinana no miaro ny mpanjaka, Ary ampitoeriny amin'ny famindram-po ny seza fiandrianany.
Voninahitry ny zatovo ny fahatanjahany, Ary ravaky ny anti-panahy ny volo fotsy.Ny fampangirifiriana dia mahafaka ny faharatsiana, Ary ny kapoka mahadio ny efitrefitra ao an-kibo.[Heb. ratra avy amin'ny kapoaka]
Ny fampangirifiriana dia mahafaka ny faharatsiana, Ary ny kapoka mahadio ny efitrefitra ao an-kibo.[Heb. ratra avy amin'ny kapoaka]
Ohabolana 1 / Oha 1
Ohabolana 2 / Oha 2
Ohabolana 3 / Oha 3
Ohabolana 4 / Oha 4
Ohabolana 5 / Oha 5
Ohabolana 6 / Oha 6
Ohabolana 7 / Oha 7
Ohabolana 8 / Oha 8
Ohabolana 9 / Oha 9
Ohabolana 10 / Oha 10
Ohabolana 11 / Oha 11
Ohabolana 12 / Oha 12
Ohabolana 13 / Oha 13
Ohabolana 14 / Oha 14
Ohabolana 15 / Oha 15
Ohabolana 16 / Oha 16
Ohabolana 17 / Oha 17
Ohabolana 18 / Oha 18
Ohabolana 19 / Oha 19
Ohabolana 20 / Oha 20
Ohabolana 21 / Oha 21
Ohabolana 22 / Oha 22
Ohabolana 23 / Oha 23
Ohabolana 24 / Oha 24
Ohabolana 25 / Oha 25
Ohabolana 26 / Oha 26
Ohabolana 27 / Oha 27
Ohabolana 28 / Oha 28
Ohabolana 29 / Oha 29
Ohabolana 30 / Oha 30
Ohabolana 31 / Oha 31